Waa kuma Saqraawi- ciyaaryahankii Puntland ay iska diiday ee haddana goolasha ka dhaliyay? |
Waa kuma Saqraawi- ciyaaryahankii Puntland ay iska diiday ee haddana goolasha ka dhaliyay?
Cayaaraha Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa maraya nus dhamaadka, waxaana galabta wada ciyaaraya gobollada Banaadir iyo Koonfur Galbeed.
Kooxda maanta soo badisa ayaa waxay fiinaalka isku arki doonaan Kooxda Maamul goboleedka Galmudug oo iyadu shalay iska xaadirisay ciyaarta kama dambeysta ah ee tartanka.
Ciyaartan oo aad u xiiso badnayd ayaa waxaa foodda is daray Galmudug iyo Puntland waxayna ku soo idlaatay 2-1, oo Puntland ayaa laga badiyay.
Baraha ay bulshada ku wada xiriirto ayaa si weyn loogu hadal hayay ciyaartan, iyadoo ay u muuqatay in shacabka Soomaalida ay ka nasteen siyaasaddii oo waxaa la arkayay gooboha siyaasadda lagu falanqeeyo oo ay dadku intooda badan ka hadlayeen kulankan labada kooxood dhex maray.
Ciyaaryahanka guusha u soo hoyiyay Galmudug
Xigashada Sawirka, Farta Sheekh, Facebook
Kulanka ayaa waxaa xiiso gaar ah u yeelay iyadoo labada gobol ay daris yihiin oo ay soohdin wadaagaan, taasi ayaa waxaa sii dheeraa oo warbaahinta iyo baraha bulshada qabsaday cayaaryahan da’yar oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Axmed Saqraawi oo Galmudug u dhaliyay labada gool ee ay Punland kaga badisay.
Laacibka da’da yar ee Maxamed ayaa aad uga dhex-muuqday ciyaarta, waxayna taasi door muhiim ah ka cayaartay guusha ay Galmudug ka gaartay tartanka oo waxay iska xaadirisay fiinaalka.
Arrinta hadal haynta dhalisay ayaa ah in sarqaawi uu ka soo jeedo Punland, balse uusan u safan kooxda, hadana uu ka badiyo isla Puntland.
Maxamed Maxamuud oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanaa gushii ay shalay ka gaareen kulankii dhexmaray iyaga iyo kooxda Puntland.
Waxa uu sheegay in Punland uusan ka codsan inuu u dheelo, balse iyagana uu eedda ku saarayo in ay arki waayeen cayaartiisa.
Waa kuma Maxamed Maxamuud Sarqaawi?
Xigashada Sawirka, Astaan TV Qoraalka sawirka, Maxamed Maxamuud Sarqaawi
Ciyaaryahankan waxa uu ku dhashay magaalada Bosaaso, oo ah halkii uu ka soo bilaabay kubadda Cagta. Haatan waxa uu u dheelaa Kooxda degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Sarqaawi ayaa sheegay in Galmudug ay cayaartiisa ku arkeen kooxda degmada Hodan, waxa uuna uga mahadceliyay fursadda qaaliga ah ee ay siyeen.
“Run ahaantii Galmudug markii ay xulanayeen cayaartooyda ku mataleysa tartanka, ima aysan weydin halka aan ka soo jeedo, waxaana taasi ku mahadsan oo ku ammaanan macallimiinta kooxda.”
Isagoo ka jawaabaya su’aal la weeydiiyay oo ay ahayd in mustaqbalka uu u ciyaarayo Puntland ama Galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu u ciyaari doono maamul goboleed kasta oo uu fursad ka helo.
“Aniga waxaan ahay Soomaali, dhammaanteen walaalo ayaan nahay marka meel kasto oo ay Soomaali jooto oo aan fursad ka helo waa iskugu kay mid.”
“Kubadda waa is dhexgal umana baahna in lagu saleeyo halka aad ku dhalatay, sababtoo ah muhiimaddu waa in aad ka cayaarto halka ay xirfaddaada kubadda ku hormareyso amaba lagaa rabo. Aniga inaan kubaDdeyda hormariyo unbaa i geysay Galmudug.”
“Aniga hamigeygu inaan Maamul Goboleed uUn u dheelo wuu ka weynaa oo waxa uu ahaa inaan Qaranka Soomaaliya u safto oo aan mar uun matalo.”